Kuratidza zvinyorwa neelebheri Labe dam
Spindleruv Mlyn Labska dhamu
Spindleruv Mlyn (Spindlermühle muchiGerman) inokosha vashanyi uye ski nzvimbo yekutenderera mumakomo eGiant. Iyo ine anenge 1 vagari. Guta rine nzvimbo ine mahekita makumi matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemashanu. Pakati peguta panoperera mugwagwa II / 100, iyo yakabatana nemugwagwa wegomo kuenda Špindlerova bouda. MuGerman, dhorobha iri raimbonzi Spindlermühle mushure memhuri yekwaSpindler, yaive muroyi mumusha. Pasati, zvisinei, musha uyu waigara uchinzi St. Peter (nhasi chikamu cheguta). Nekudaro, mukukumbira kwemvumo yekuvaka chechi, yakatumirwa kuna mambo, yakataurwa zvakare - yakasainwa muna Špindlerův Mlýn. Zvizvarwa zvekunyika zvakanyorera kunyorera izvi. Uye sezvo mazita akafanana emataundi achijairika munyika dzinotaura chiGerman, pakave nekukanganisa uye mvumo yekuvaka chechi mu Špindlerův Mlýn yakadzoserwa. Zvizvarwa zvevanhu zvaifarira kutumidza zita remusha kuti vakwanise kuvaka. Kutumira chikumbiro chitsva kunogona kutorwa sekutuka kuhofisi isingakundiki, uye chechi zvirokwazvo ingadai isisipo.